I-Pacam ehamba phambili kunye ne-Affamable Assam Tour Package | Ukufumana iinkcukacha ezingakumbi Qhagamshelana + 91-993-702-7574
Ungayifaki umhambi phakathi kwakho Iintlanzi zeNtsantyambo Assam Tour Package. Assam has a umdla kubakhenkethi wonke uhlobo mhambi, enoba uhlobo ngumthandi, bhadu, adventure ungumzondeleli, umthandi zasendle okanye photographer. Ukwabelana ngemida yawo kunye neBhutan, Nagaland, Manipur kunye neMizam, iAsam yindawo ehle eyaziwa ngokuba 'isango eliya eNyakatho East'. I-Assam Tour Package ikuvumela ukuba uhlolisise le ndawo engahambiyo. I-Assam lizwe elihle kunye nobuhle obuhle, ilizwe apho iBrahmaputra enamandla igeleza khona. I-Pacam ye-Assam yePakethi yeyona ndawo ifanelekileyo idibeneyo efanelekileyo, inkcubeko kunye nembali. Ezi phakheji zenziwe ngokukodwa ngabachwephesha bethu bezohambo ukubonelela ngamava ahamba ngefestile. Ukuxhaswa kwemozulu enobulunga, indawo evelelekayo, iindawo eziphathekayo zeeti, iimvula zamanzi, indawo ehle kakhulu kunye neendawo eziqhelekileyo, i-Assam yindawo apho unokuphumla khona umphefumlo wakho. I-Pacam ye-Assam yePakethi iya kuzalisekisa ifantasy yakho yokuhamba.
Assam uzele enezityalo zazenziwe nezilwanyana, ubuhle elihle ezintle basezintabeni, imilambo kunye namathafa qikeka, kunye nenkcubeko yawo bala ngeendibano neminyhadala. Unokufumana uhambo olugqwesileyo lwe-Assam Tour kunye nePakethe ye-Assam Tour Package ye-Sandwich. U-Assam ngumvelisi omkhulu weTimber kunye neTiye kweli lizwe kwaye unesixhobo sokuQinisa i-Oil edala kunaye eNdiya. Ngaphandle Timber kunye Tea, Assam nayo eyaziyo Petroleum, Natural Gas, Amalahle, Limestone njl Assam lilizwe iimfihlelo, ubomi kunye namabali. Ngomnye wamazwe amaninzi aseMerika. I-Assam nayo iyaziwa ngezinto zayo ezenziwe ngezandla ezenziwe ngombane, i-bamboo, iibras njl. Hlalani nikulungele ukuhlola le ndawo engummangaliso kunye neTye leNtshontsho.
Kaziranga ukuya eShillong ukuya eGuwahati
Ikhowudi yoKhenketho: 024
Shillong no Guwahati
Ikhowudi yoKhenketho: 023
IMpuma ye Triangle
Ikhowudi yoKhenketho: 020